Semalt SEO Agency: Kuisa pfungwa pakuonekwa uye Kwete kungobhururuka chete
Kana zvasvika kune SEO, iyo yekupedzisira chinangwa chewebsite dzese ndeyekusvika pamusoro. Kudzoka mumazuva ekare, zvaireva kupinda mukati megumi "gumi ebhuruu." Kunyange iyo "yepamusoro peGoogle" chinangwa chisina kuchinja zvakanyanya kuvanhu, maitiro aunoita achinja zvakanyanya.
Tisati tanyanyisa kudzika, zvakakosha kuti tinzwisise nharo yakamboenderera kwenguva kwenguva muSEO. Idzi gumi dzema blue link dzakafa here? Nezvinhu zvitsva zveSEO zvinobuda gore rega rega, mhinduro kumubvunzo uyu inogona kutsamira pachinangwa chako. Isu tichaenda mune rakakura zasi pazasi.
Chii chinonzi Blue Links?
Kana iwe uchinzwa nyanzvi yekushambadzira ichitaura nezve gumi bhuruu zvibatanidza, ivo vari kutaura pamusoro pemigumo gumi yepamusoro paGoogle. Zvichienderana nekutsvaga, iyo yekutanga peji reGoogle inotora inosvika makumi manomwe neshanu kubva muzana muzana traffic. Kusvikira izvo gumi bhuruu zvisungo ndiko kukosha kune kubudirira paGoogle. Zviri nani kutsemura chetatu chechina che pie nevanhu gumi pane kuti acheke imwe chete yechina.
Zviblue, zvinotaurwa nezvazvo, ndeimwe nzira yekutaura zvekutsvaga. Kana iwe uchitarisa kune peji rekutsvaga injini mhinduro (SERP), zvisungo zvebhuruu hazvisanganise zvakabhadharwa mibairo, zvikamu zvezivo, uye snippets inoonekwa kumusoro kana padyo nepamusoro.
Ko maBlue Links Haina Kukosha Kutsvaga Muzvino SEO?
Tichifunga kuti gumi yekutanga mhedzisiro paGoogle ichiri kugashira traffic yakawanda, pachine basa rakawanda rekushandisa mukuvateverera. Aya akaratidzirwa snippets pakutanga anotora nzvimbo yakawanda yekutengesa zviitiko zvepamberi peji. Nzira yakanaka yekubata idzi haisi yekudzivirira, asi kushandisa ivo sekufunga.
Ini Ndinopinda Sei Mune Nzvimbo Yakaratidzwa Snippet Area?
Ivo vanokwanisa kupinda mune inoonekwa nzvimbo snippet nzvimbo vano peta yavo yekudzvanya-kuburikidza chiyero. Chinangwa chako ndechokupinda munzvimbo iyoyo. Zvakawanda senge chero SEO purojekiti, mubvunzo unogona kuwana unonetsa. Nekudaro, pane dzimwe SEO dzakanakisa maitiro ekuchengeta mupfungwa dzinozobatsira iwe.
Terera Tarisa kune iyo Fomati
Vanokambaira paGoogle, kana iyo AI inotarisisa mawebhusaiti ekugadzirisa, inotora kana zvasvika pakuumbwa. Nekuongorora maitiro ezvipi zvinopinda muzvikamu izvi, iwe unenge uine pfungwa yakanaka yekuti ungatanga sei. Ngatitore muenzaniso: nzira yekubheka keke.
Tichaenda kuburikidza nemhando dzakasiyana dzemapipi gare gare, asi uyu muenzaniso unotipa nzira yekubheka uye chikamu cheQ & A. Kudzvanya chero cheizvi kucharatidza rondedzero dzinoverengeka. Rondedzero dzadzo dzakaverengeka dzinoshaya mabharoti ekushandisa mukana wekuverenga kwemhando yeGoogle. Mhando yavo yemitsara yakatwasuka uye iri nyore kuverenga. Kupurudzira pasi kunozivisa zvimwe mienzaniso. Izvi zvinosanganisira mavhidhiyo, rondedzero dzakazara, uye ndima refu.
Iwe unozoona kuti mamwe eaya mawebhusaiti akangogadzikana pakushandisa mavara avo ematagi. Nekushandisa yako H1, H2, uye H3 tags seyakasarudzika yekuyera kuyera, iwe uri kutevedza SEO maitiro akanakisa. Google inokwanisa kusarudza ndima makumi mashanu neshanu pasi pemusoro weH3 inoita kuti mhinduro ive nyore.
Teerera Kune Izvo Zvemukati
Anoratidzwa snippets ndeyekupindura mibvunzo. Iyi mibvunzo inyaya dzakajairika idzo Google yakacherekedza mukati meiyo niche. Iyi mibvunzo iyo iwe yaunogona kunge uchipindura.
Kana iwe urikushanda bhobho muguta rakakura, nzira yakanakisa iyo vanhu vangakuwana ndeye kurova SEO. Nekukwezva vanhu kune webhusaiti yako, iwe unoda kupa nhevedzano yezvinyorwa pamaitiro ekugadzira gwayana zvakanaka. Mushure mekutsvagisa maforamu pamabatiro enyama, maresitoreti pamhepo, uye zvakajairika google mhinduro, iwe unowana mutsara wemibvunzo yaungapindure.
Zvakanaka kunzwisisa kuti mutengi angabvunza sei mibvunzo. Iyi zano ichaunza vanhu kwauri. Kuve ne "nzira dzakanakisa dzekutarisa mutaundi" chirongwa chakadai chakashanda makore makumi mana apfuura. Kuti tiwane vatengi nhasi, tinofanirwa kuzvisimbisa pachedu seyakavimbika nyanzvi pamusoro penyaya yacho. A blog inzira iri nyore yekuita izvi.
Isa Yako Yakanaka Stuff Up Front
Kana iwe ukatarisa mumapepanhau uye kushambadzira mumakore zana apfuura, iwe uchaona dingindira rakajairika. Vanhu vane kudzidziswa munzvimbo idzi vanokuzivisa iwe nezvechinhu chinonzi reverse piramidhi. Iyi piramidhi ino inverted chimiro ndiyo inoshandiswa nevanyori venhau kana vaisa zvanyanya kunaka mumusoro. Patinoshandisa izvi kufunga kune yedu H2 uye H3 misoro, Google inozoona izvi.
Iwe unogona kunge uchifunga kuti rako sebasa saiti bhizinesi nderokuita kuti varambe vachifunga nezvechigadzirwa chako sekureba sezvazvinogona. Asi muvhareji wekutarisisa wevanhu masekondi masere. Kana musoro wako usingavanyengedze, unenge watorasikirwa nawo.
Kana iwe ukashandisa iyi pfungwa kune yako mablog, haugone kuona mutsara wemablogi kumberi-kurodha zvese zveruzivo rwunobatsira. Iwe uchaona kuti musoro wega wega unoshanda semubvunzo, uyo unoteedzera nekukurumidza pamhinduro. Nzira yavo inogona kuve yekusasa mune ruzivo runobatsira kutungamira kumhinduro. Zvisinei, kana iwe ukaita kuti vanhu varambe vakamirira kwenguva yakareba, ivo vachafara kuwana iyo mhinduro yekukurumidza kumwe kumwe.
Semalt Angandibatsira Sei Neizvi?
Chikwata chaSemalt chevanyanzvi vanoziva nezvenyaya idzi. Nekudzidziswa pane yakanakisa maitiro eSEO, Semalt anozoshandisa mikana iyi nekutarisa mazwi akakosha. Nekuisa aya mazwi akakosha mune izvo zvinoratidzirwa snippets, iwe unomira pakati pekumusoro kune chaiyo kutsvaga.
Kune mamwe mazwi akakosha ayo mabhizinesi anowanzo tarisa. Nokubatanidza aya mazwi akakosha pamwe nezvinoratidzwa snippets, iwe unogona kuzviwana Iwe uri munzvimbo iri nani yekukwira kune mamwe mazwi makuru emakwikwi. Taura ne SEO nyanzvi nhasi kuitira kuti iwe ugone kuvandudza chirongwa chekuita kuti uende newe kuGoogle yepamusoro.
Ndedzipi Iwo Mhando Dzakasiyana dzeNhaurwa dzeNyowani?
Paunenge uchigadzirisa zvirimo zvemashoko ezvinyorwa, zvakakosha kuti uzive kuti pane maviri akasarudzika midhiya sarudzo: mhando uye vhidhiyo. Iyo yakawanda yezvatichazo pfuura muchikamu chino ishoko-rinobva pashoko, asi vhidhiyo nzira iyo iwe unofanirwa kufunga kuwedzera kune yako midhiya chinangwa. Vhidhiyo ibasa iro Semalt inopa. Tichaenda nemunharaunda ina.
Akadzvanywa kana Akanyorwa Nhamba
Hazvitungamiri kune yako webhusaiti
Inoda ruzivo rwekugadzirisa
Google, iyo iri muridzi weYouTube, inofarira kutsigira yavo mhando. Nekuda kweizvozvo, YouTube snippets inzira yakanaka kwazvo yekunongedza vanhu. Aya manyoka haatungamiri vanhu kune yako saiti, asi anovatungamira kuburikidza ne "funnel" iyo inogona kudzokera kune yako saiti. Zano iri rinogona kunge risiri dambudziko, asi iwe unowanz kurasikirwa nevanhu nekuwedzera iwe unodzika pasi pejuru.
Kugadziriswa kwevhidhiyo iri zvakare rakaomarara maitiro ane huwandu hwakakwira hwekumusoro-hwekudyara. Iwe uchafanirwa kutanga nzvimbo yehunyanzvi mukati mebhizimusi rako kana imba. Iwe unozoda kurira-chiratidzo nzvimbo iyoyo. Mupepeti anozodikanwa zvakare kuti ave nechokwadi chekuti unogadzira zvemhando yepamusoro zvemukati. Iwo mukana wakanaka, asi wakanyanya kusiiwa kune vanhu vane hunyanzvi.
Chikamu chikuru cheruzivo
Iyo HTML inogona kunyengera
Inogona kutaridzika zvakanaka paGoogle pane peji rako
Haina kukwezva kwepamoyo
Tafura snippets inoratidzika, data-inotyairwa zvinhu izvo zvakasiyana. Izvi "zvakasarudzika" zvinobva pachokwadi kuti mawebhusaiti mazhinji haakwanise kuzviisa izvi zvakanaka. Vazhinji vanofungidzira kuti iwe unofanirwa kuisa tafura pane yako saiti kutora mukana weizvi. Asi chero data yakaiswa mumakoramu uye mitsara inogona kukodzera bhiri.
Zvikonzero zvakawanda zvekuti usingaone tafura ndiko kushomeka kwavo kwekukwezva. Vamwe vanhu havadi kuona seti data. Zvakare, iyo HTML yekugadzira idzi inoda kumbotsvaga. Vaya vasina ruzivo pamusoro penyaya vangasada kutevera iyi sarudzo.
Inopa ruzivo rwakanyanya
Inogona kusanganisira Call to Action (CTA)
Pink ine urefu hwemavara
Paragraph snippets ndeavo ane anovharira rakasimba vhezheni. Ivo vanowanzo kungova pazasi kweH3 semhinduro kumubvunzo unoburitswa mumusoro. Inopa ruzivo rwakanyanya uye inopa mukana wakanyanya wekubatanidza CTA.
Izvi ndizvo zvidiki zvinonakidza kuti vaverengi vafambe kuburikidza. Tichifunga nezve sere-yechipiri nguva yekutarisisa yambotaurwa, unogona kuvarasikirwa nendima. Zvakare, Google inoita kunge iine nyaya imwechete. Ivo vanogona kusarudza kubvisa zvinyorwa kana shanduko mune yavo algorithm inotarisa kuti iyo yakareba.
Inogona kuve nehunyanzvi
Easy kunzwisisa nhanho-nhanho-nhanho
Rine mashoma ruzivo
Kwete kuita zvakawanda
Amabhurosi uye akavezwa mazita ezvinyorwa ndiyo yechipiri-yakajairika sarudzo yauinayo. Vanosvika vakananga padanho, vachikupa rondedzero yesarudzo dzinotsvaga kupindura mibvunzo yakanyorwa mumusoro. Iwo ndiwo mafomu akanaka kwazvo ekupa mirairo-nhanho-nhanho. Aya maitiro edzidzo ndiwo anonyanya kufadza ekupa mhinduro ipapo.
Iyo cons iyo inouya nekusarudza yakaverengerwa kana yakanyorwa manhamba ane hukama nedenga. Nepo mabara kana nhamba dziine huwandu hwekuchinja, kuona idzi rondedzero dzinotanga kuve yakajairika. Zvakare, mabara kana manhamba ane zvishoma nzvimbo yekugadzirisa nyaya dzakaoma.
Iyo gumi bhuruu yekubatanidza iyo yatinoziva yakaderera pane zvinyorwa, mepu, mavhidhiyo, uye Q&A zvikamu kumusoro kweiyo injini yekutsvaga. Nepo chinzvimbo muzvikamu gumi zvepamusoro zvichiri kukoshera kubudirira, kurova idzi snippets kunoonekwa sekukosha pakuwedzera kuoneka. Kana mumwe munhu akaedza kutora yako nhamba yekutanga slot nevhidhiyo kana ndima, basa rako nderokuda chinangwa cheizvi.
Nekuziva kwezvinhu zvakanyorwa pamusoro, iwe unozokwanisa kunongedza maviri epamhepo media chiteshi kuti uvandudze kugona kwako kuti upinde mune aya anoratidzwa snippets. Yakasanganiswa nechikwata chaSemalt che SEO nyanzvi, chinangwa chako chekuuya pamusoro peGoogle chiri mukati mekusvika. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota usvike kune nyanzvi nhasi.